Imibuzo evame ukubuzwa - Izikhwama zeQuanzhou New Hunter & Luggages Co., Ltd.
Singabakhiqizi abanolayini abancikile pls! Sinezindawo zethu zokuhweba! Kulokhu, singasebenza kahle ngqo ngaphandle kokungaqondi kumakhasimende ethu.
Yebo kunjalo .
Uma ufuna isampula ekuqaleni esinalo enkampanini yethu, lingaba mahhala futhi nemithwalo izolethwa kuwe.
Uma isampula kufanele ithuthukiswe ngokususelwa kumklamo wakho njll, sizohlola izindleko zempahla njll futhi sikwazise, ​​uma lezo zinto esesivele sinazo efektri, isampuli ngokujwayelekile ingaba mahhala. Uma ngabe okokusebenza kukhethekile futhi kukhokhiswa okuningi, kulokhu, sizoxoxa nawe ukuze ubone ukuthi imali yesampula ingakhokhwa kanjani ibe ngcono.
Yini isikhathi sokuhola sesampula?
Imvamisa izinsuku eziyi-7-10 kuye ngesitayela osibeka.
Wenzani ukulawula ikhwalithi yohlobo ngalunye lwezikhwama (Ngesampula / Ngokukhiqizwa kwenqwaba)?
a) Isampula: * Ukuhlola okuningiliziwe kwephethini lephepha; * Isesha indwangu & itrims ukulingana umklamo; * izindlela zokuthunga zokuhlola; * ukuhlola isampula lokugcina nethimba ukubona ukuthi kukhona yini okunye okudinga ukwenziwa ngcono ngaphambi kokuthumela kumakhasimende.
* Ukulungisa izinga lokuhlola hhayi kuphela ekusebenzeni kwesikhwama kodwa nasekuhlaziyweni kwengxenye yamakhemikhali okususelwa ezimakethe zamakhasimende ethu, ukwazisa amakhasimende ethu ngokuvunywa kwawo kokugcina
b) Ngama-oda womkhiqizo omningi: kususelwa ekusebenzeni kwesampula, yonke imininingwane nemibuzo evame ukuxazululwa ngamakhasimende nathi. sizolandela uhlelo lokukhiqiza ukuqinisekisa ukuthi ukukhiqizwa kwenqwaba kwenziwa ngesikhathi! Ngesikhathi sokukhiqiza, uma kukhona izehlakalo, sizokwazisa amakhasimende ethu kusenesikhathi ukuqinisekisa ukuthi banesikhathi sokuqinisekisa noma sokuxazulula inkinga kusengaphambili.
Unayo i-catelogue yokuhlinzeka ngesizini ngayinye?
Yebo, sinomklami wethu, siklama futhi sakha izinhlobo ezahlukene zezikhwama isizini ngayinye ukuhlangabezana nemfashini.
I-Catelogue unyaka ngamunye uhhafu onohlobo oluhlukile lwezikhwama ngaphakathi! pls xhumana nathi uma udinga i-e-catelogue yethu.
Ungenza kanjani uma ngikwazi ukufinyelela i-MOQ yakho?
Sinezinhlobo ezahlukene zezindlela zokuphakamisa inkomba yakho. sithemba ukuthi noma yikuphi okungenzeka kube yindlela ocabanga ukuthi usizo oluningi lokuhambisa kuma-oda. Isibonelo: Imvamisa isizathu sokuthi awukwazi ukuhlangabezana ne-MOQ yethu ukuthi unedizayini yakho kepha awukwazi ukufinyelela ku-MOQ ngathi ukubhuka indwangu kanye nezicucu njll. Uma kunjalo, sizozama ukuphakamisa indwangu efanayo noma imidwebo yokubona uma kungenzeka ukukuhlangabeza kahle.OR, uma ubungako bakho buyizicucu ezimbalwa zingama-30-50pcs, sizophakamisa isitoko sethu, esibuye sibe nekhwalithi enhle kepha amanani entengo, ukubukeka kwemfashini ngesizini ngayinye. Sizoba nomphathi wethu ochwepheshe ukuze sixoxe nawe ngohlobo lwemibuzo ngokuhamba kwesikhathi uma uthola i-imeyili yakho.
Ungakwazi yini ukwenza ngokwezifiso logo?
Yebo, unyaka ngamunye sihlakulela izinhlobo ezahlukahlukene zamabhegi.makhasimende amaningi angakhetha ukwakheka kwesikhwama sethu kepha enze ngokwezifiso uphawu lwazo ukuthi ibhizinisi lelo esisebenza kulo njalo.
Hlobo luni lwemigomo yokukhokha oyamukelayo?
Idiphozithi T / T. D / P D / A PAYPAL YENYUNYANA YASENTSHONA KUNGAXOXISWA.
Yini iwaranti yakho ngemikhiqizo?
Sinohlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi, futhi sinochwepheshe wezobuchwepheshe wokuxhumana nawe, siqoqa izibalo zakho emva kokuthengisa, kulokhu singaqonda kangcono kakhulu ukuthi yiziphi izici esisaqinile futhi esincintisana nazo emakethe, nokuthi yisiphi isici esisasidinga ngcono. Sizobhekana nanoma iyiphi inkinga nangemva kokuthengisa uma usuxhumane nathi, AKUKHO BUNGOZI NGAPHAMBI KOKUTHENGISWA.